Abenzi be-Graphite Rotor & Suppliers | I-China Graphite Rotor Factory
Ukuma kwe-graphite impeller kuyindlela elula, enganciphisa ukumelana lapho ijikeleza, futhi ukungqubuzana nokuhlasela ngamandla phakathi kwempepho noketshezi lwensimbi kuncane. Ngakho-ke, isilinganiso se-degassing singaphezu kwama-50%, isikhathi sokuncibilikisa sifinyeziwe futhi izindleko zokukhiqiza ziyancipha.
I-graphite rotor yakhiwa izingxenye ezimbili: induku ye-Rotor kanye nombhobho. Uhlelo lokudlulisa luhambisa i-graphite rotor ukuze ijikeleze, bese kuthi i-argon noma i-nitrogen ishaywe ngensimbi encibilikisiwe ngenduku ye-rotor nombhobho. I-graphite rotor ejikeleza ngesivinini esikhulu ihlakazela i-argon noma i-nitrogen engena ekuncibilikeni kwensimbi ukuze yenze amabhamuza amaningi amancane, abenze bahlakazeke ensimbi engamanzi. Ngasikhathi sinye, i-Rotor ejikelezayo iphinde ikhuthaze ukusabalala kwe-hydrogen kanye nokufakwa ekuncibilikeni kwensimbi, kuyenze ixhumane namabhamuza. Ekuncibilikeni, ama-bubbles amunca i-hydrogen ekuncibilikeni, amunce ukufakwa kwe-oxide, bese ekhishwa endaweni encibilikayo njengoba ibhamuza likhuphuka, ukuze ancibilike
Induku ye-graphite ejikelezayo
I-graphite rotor iyingxenye efanelekayo yokupompa umoya njengamanje, futhi ukusebenza kwayo okuhle kokuthambisa kungcono kakhulu kunokokuthambisa okujwayelekile. I-graphite iyinto yokuvikela imvelo, i-graphite rotor ingagwema ukungcoliswa kwemikhiqizo esetshenzisiwe.
I-oxydation ukumelana ne-graphite rotor yamanzi we-degassing aluminium